Kabary famaliana Tokim-Pitiavana - Informations et Actualités sur Madagascar
Culture Education Kabary famaliana Tokim-Pitiavana
by Alpha world on 23 h 09 in Culture, Education
Mpangataka: Tompokolahy sy Tompokovavy
Matoa hono ny kakafotra no be antsoantso, dia tandindomin’ny oran-koavy, ny omby no mimà, tsy haitraitra embonembona, ny akoho no mikakakaka asesiky ny atody.
Ary Njato no tonga eto asesiky ny fitiavany an’i Mirana.
Raha ny tokony ho izy, dia izy mivantana mihintsy no hamboraka izany, ampahibemaso eto, nefa raha izay no resahiny tamiko izay, na dia haraina eto aza ny andro, dia tsy ho vita izany.
Koa zaran’ny siny hono, ny miaritra ny mahangoly, zaran’ny vilany ny miaritra ny mahamay, zaran’ny toko ny mibata ny mavesatra; ary raha anjara no resahana, fantatra fa ny vitsika aza mba mitondra izay zakany maika moa fa isika olombelona. Koa anjarako ny mitondra fitenenana eto ankehitriny. Aza matahotra ianao Njato fa ataoko toy ny vato kolonjy natelim-boay ny teny nampitondrainao ahy, atelin-tsy lo; aloa tsy miova bika.
Somary gaga ihany tokoa izahay, raha vao nahare ny fanontaniana natonareo teo, tovolahy hangata-bady ve ho anontaniana fitiavana?
Nahoana no dia manatsafa tahaka ny mpaka afo?
Rehefa mandinika anefa izahay dia misaotra anareo ihany, satria tsy nanafim-bato hanafintohina ianareo na nanao resaka tokana zary fosa, fa ny volana imaso tsy mba kilema.
Koa misaotra indrindra re tompoko o. Tsapanay fa olon-tsoa, olom-banona tokoa ianareo no iandrana vovona. Hoy ny tenin’i Njato hoe: alamino hono ny saina, tonio ny eritreritra fa ny hitsikitsiky tsy miala amin- kazo, ny mpianala tsy manadino famaky, ny mpiandakana tsy misaraka amin’ny fivoy, ary ny tovolahy hampaka-bady tsy misaraka amin’ny fitiavana, ka hoy izy hoe:
Tiany tahaka ny tenany, hono i Mirana; raha tsy ny ainy no tapitra, tsy foana ny fitiavany. Tiany tahaka ny lamba landy, ka raha vao reharehany, madio voninahiny, hitafiany raha mangatsiaka, hisampinany raha faly, hihokonany raha malahelo, hisarongitany raha tezitra, hisikinany raha miasa. Raha fintinina izany dia: eto an-tany tsy mifandao ary na any am-pasana aza tsy mifanary.
Raha lazaina amin’ny fomba hafa indray dia aza matahotra ianareo fa tsy tahaka ny ranon’ando akory ka tsy tratrin’ny andro maraina, ary natratrany aza manjavona. Fa toy ny loharano tsy manam-paharitana, ririnina misy hotsifina, fahavaratra be hantsakaina. Fitia tsy vasokin’ny andro, tsy lefin’ny alina, tsy voaovan’ny taona.
Henonareo amin’izany tompoko ny teny nampitondrain’ I Njato. Koa mamerina ny fangatahana izahay.
Tsy trano be soa no angatahanay, fa mety ho ravan’ny tafio-drivotra izany. Tsy vola be am-bata, fa mety ho lasan’ny mpangalatra izany, fa ilay ho vohitra, ho tokantrano maharitra mandrakizay, ka raha vitan-jahatra re hono tompoko, ny mita aza safarina amin-tsambo. Raha naharesy lahatra anareo izay nambara teo dia mino izahay fa tsy hisy hitsangan-kofefiny na hitsivalan-kohidiny intsony ianareo, fa hanome ny zanakareo Mirana ho tokatranon’ny zanakay Njato.
By Alpha world at 23 h 09